Solutions for iPad ah oo aan ku biiri doonaa iTunes
Waxa la Sameynayo Marka iPadku uusan ku xidhnayn iTunes
Ma leedahay iTunes iyo iPadka aan la socon? IPad wuxuu ubaahan yahay in uu ku xiro iTunes hababka muhiimka ah ee nidaamka iyo taageerida codsiyadaada iyo macluumaadkaaga. Laakiin ka hor intaadan baxin oo aad soo iibsato fiilo cusub, waxaa jira waxyaabo dhawr ah oo aan ku hubin karno.
Hubso in kombuyuutarku aqoonsan yahay iPad-ka
Ugu horeyn, hubso in kombiyuutarku ay u aqoonsanayaan iPad-ka. Markaad iPad ku xirto kumbuyuutarkaaga, guluub yar oo iftiin leh waa in uu ka muuqdo mitirka batteriga ee ku yaal dhinaca sare ee shaashadda. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad ogaatid iPadka ay ku amrayso . Wuxuu sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad ogaatid in kombuyuutarku uu aqoonsan yahay iPad-ka. Xitaa haddii mitirka baterigu uu akhriyo "Fadhiyeyn la'aan." taas oo micnaheedu yahay in dekeddaada USB aysan awood u lahayn inay iPad ku soo dallacdo, waxaad ugu yaraan ogtahay in kombiyuutarku aqoonsaday kaniinigaaga.
Haddii aad aragto foornada iftiinka ama erayada "aan la bixin," kombuyuutarku wuxuu aqoonsan yahay iPad inuu ku xiran yahay waxaadna sii wadi kartaa tallaabada sadexaad.
Hubi iPad Cable
Marka xigta, hubso in dhibaatadu aysan ku jirin dekedda USB adigoo iPad ku duubaya deked ka duwan kan hore u isticmaalay. Haddii aad isticmaasho hub USB ama aad ku xirayso qalab dibadda ah sida keyboard, hubso inaad isticmaasho deked USB ah kumbuyuutarka laftiisa.
Haddii aad iPad ku xirto meel kale oo USB ah, waxay xallisaa dhibaatada, waxaad yeelan kartaa deked xun. Waxaad ku xaqiijin kartaa tan adoo ku xiraya qalab kale oo ku yaal dekedda asalka ah.
Kombuyuutarada intooda badani waxay leeyihiin meelo ku filan oo USB-ga ah oo hal jajab ah uusan ahayn mid aad u weyn, laakiin haddii aad aragto adigu aad u hooseeyso, waxaad ka iibsan kartaa boorsada USB ee dukaanka elektaroonigga ah.
Awoodda Hooseysa Waxay Caawin kartaa Dhibaatooyinka iPad
Xaqiiji in iPadka uusan u baahneyn in uu ku shaqeeyo awood aad u hooseeya. Marka batteriyadu ay ku dhowdahay in la dhimo, waxay sababi kartaa dhibaatooyinka iPad. Haddii iPadkaaga ku xiran yahay kombuyuutarkaaga, kala fur si aad u hubi boqolkiiba bateriga, kaas oo ku yaala dhinaca sare ee iPad ee ku xiga mitirka batteriga. Haddii ay ka yartahay 10 boqolkiiba, isku day in aad iPad ku iibsatid si buuxda.
Haddii bateriga boqolkiiba lagu beddelo erayada "aan la bixin" markaad iPad ku xirto kombuyutarkaaga, waxaad u baahan doontaa inaad ku dhegto qalabka derbiga adoo adeegsanaya qalabka iPad-ka.
Dib u bilow kumbuyuutarka iyo iPad
Mid ka mid ah tabaha ugu khatarsan ee ku jira buugga ayaa ah in dib loo bilaabo kombiyuutarka. Waa wax cajiib ah inta jeer ee tani xallineyso arrimaha. Aynu dooranno inaan xirno kombuyuutarka halkii aan si fudud dib u bilaabi lahayn. Marka kumbuyuutarkaaga gabi ahaanba hoos loo dhigo, ha u fadhiisto illaa dhowr ilbiriqsi ka hor inta aadan dib u soo celin.
Iyo inta aad sugeyso kombiyuutarka inuu dib u soo noqdo, horay u sii qaado isla markaana sameeya iPad-ga.
Waxaad dib u bilaabi kartaa iPad adiga oo xiraya barta joogsiga ee geeska sare ee qalabka. Ka dib dhowr ilbiriqsi, badhanka cas oo leh fallaadhi ayaa soo muuqan doona, adigana ku hagaya inaad xajiso qalabka korontada. Marka shaashaddu ay gebi ahaanba madow tahay, sug dhawr ilbiriqsi kadibna mar kale xiro badhanka isku xirka. Calaamadda Apple ayaa ka muuqan doonta dhexda dhexe ee shaashada halka iPad-ka loo duubo.
Marka kumbuyuutarkaaga iyo iPad-ka dib loo soo saaro, isku day in aad iPad ku xirto iTunes markale. Tani waxay inta badan xallin doontaa dhibaatada.
Sidee loo soo celiyaa iTunes
Haddii iTunes aysan weli aqoonsanayn iPad, waa waqtigii tijaabinta nuqul nadiif ah ee iTunes. Si tan loo sameeyo, marka hore uninstall iTunes ka computer. (Ha welwelin, uninstall iTunes ma tirtiri doonto dhammaan muusikada iyo barnaamijyada ku jira kombiyuutarka.)
Waxaad ka saari kartaa iTunes on kombiyuutarka ku salaysan Windows adigoo tagaya Miiska Start iyo xulashada Control Panel. Raadi astaanta lagu calaamadeeyay "Barnaamijyada iyo Noocyada." Maqaalkan dhexdiisa, si fudud hoos u xaji ilaa aad ka aragto iTunes, midigta ku dhufo mashiinkaaga oo dooro uninstall.
Marka aad ka bixiso iTunes ka computer, waa inaad soo dejiso version ugu dambeeyey. Ka dib markaad dib u cusbooneysiiso iTunes, waa inaad awood u yeelatid inaad iPad ku xirto si fiican.
Sida loo Xallinayo Dhibaatooyinka Dhibaatada leh iTunes
Weli dhibaato? Waa dhif u ah tallaabooyinka kor ku xusan si loo saxo dhibaatada, laakiin mararka qaarkood waxaa jira dhibaatooyin darawalnimo, faylasha nidaamka ama khilaafka software kuwaas oo ugu dambeyntii asalka u ah dhibaatada. Nasiib darro, arimahan ayaa ah kuwo aad u adag in la hagaajiyo.
Haddii aad isticmaasho software antivirus, waxaad isku dayi kartaa inaad xirto oo aad isku daydo inaad ku xirto iPad si aad u computer. Nidaamka anti-virus ayaa la ogyahay in mararka qaar ay sababaan dhibaatooyin barnaamijyada kale ee kombiyuutarkaaga ah, laakiin waa muhiim inaad dib u bilawdo barnaamijka anti-virus ka dib markaad la leedahay iTunes.
Isticmaalayaasha Windows 7 waxay isticmaali karaan Diiwaanka Talaabada Dhibbanaha si ay uga caawiso dhibaatada dhibaatada.
Haddii aad isticmaasho Windows XP, waxaa jira qalab lagu baadho oo lagu dayactiro faylashaada nidaamka .
Sidee loo Bixiyaa iPad My Disabled
Xallinta dhibaatooyinka AirPlay: Waxa la sameeyo marka aan la shaqayn
Sidee loo Xaqiijiyay: iPad-kayga wuxuu iga codsanayaa My Password Password
3 Waddooyinka lagu Sameeyo iPad la qaboojiyey
Maxaad Sameyn Kartaa Marka Ilmahayga Cusboonaysiin Karin
Sidee loo Fixin karaa: iPad-kayga wuxuu kudhowyaa ama wuxuu muujiyaa Qurxinta Dammaanadda
Sida loo Xaqiijiyo iPad Ghost Typing and Erratic Activity
Maxay Sababta u Sameyneysaa Website Shakhsi?
Sidee loo kaydiyaa Snapchat Videos
Epson Home Cinema 2045 Muuqaal - Tijaabooyinka Ciyaaraha fiidiyaha
Sida loo bilaabo Windows XP ee Habka Badbaadinta
Dejinta Qoraalada Gawaarida 3D - Isbeddel yar iyo Isbeddel Xawli
Talo-tallaabo tallaabo ah oo lagu yareeynayo sawirrada GIF Sawirrada
7 Jiir Safarka ugu Wanaagsan ee Suuqa Badan ee 2018
Sida Loo Beddelo Ciyaar Joogta ah PSP iyo PS3
Ma Qoraa Qoraal kale ama Iskooga Tag?
Maxay u Isticmaalaan HTML Semantic?
Sida Loo Bedeli Lahaa Email Gaar ah ee Muuqaalka
Halkee laga iibsadaa iPad
Sida Loo Faraxsamo Loo Yeelo Amazon Adigoo leh Web Browser-kaaga
Sida Loo Weydiiyo Waxyaabaha Ku Caawiya Emailka
Baahida loo qabo Hoosaad Deg-deg ah 2 Khiyaano PC
Faa'iidooyinka iyo Fikradaha ee Rooting Your Phone ah
Dib u eegista Forza Horizon (X360)
Horudhaca Cajiibka Wareega
Astaamaha Gaadhiga ah ee Gaariga: Qaybaha Madaxa, Ambalaansayaasha, iyo Afhayeenka
Sidee loo Xidhaa Xinput9_1_0.dll Looma Helin ama Dhamaan Khaladaadka
NVIDIA 3D Muuqaal-Muuqaal-Hore, Mashruucyo, PCs, iyo Laptops
Gaariga Gacanta Soodhaweynta: Bluetooth, IR, RF iyo Wired